လက်မထပ်ခင်လိင်​ဆက်ဆံတာက မှားသလား | သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုရာ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအကြောင်း သိပါသလား
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ရမလဲ
တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခန်း ကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးက ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့်ယုံကြည်လာကြောင်း ရှင်းပြ
အတိတ်မှ ပုံရိပ်များ ဇန်ဟီ
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ပင်ဂွင်းအကြီးစားတွေရဲ့ အမွေး
လိင်ဆိုင်ရာ စော်ကားနှောင့်ယှက်မှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ
ဖုန်းနဲ့စာပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ
ငါ့မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ (အပိုင်း ၁)
အနိုင်ကျင့်သူကို လက်သီးမသုံးဘဲ ရင်ဆိုင်နည်း
အီဂျစ်ပြည်ကို ရောက်သွားတဲ့ ယောသပ်
နိုးလော့! | စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘစ်လာမာ ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
သမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့် | လက်မထပ်ခင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း
‘ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်မှာ သင်တို့သည် မတရားမေထုန်ပြုခြင်းကို ကြဉ်ရှောင်ကြစေရန်ဖြစ်၏။’ —၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၃။
လက်မထပ်ခင်လိင်ဆက်ဆံတာကို တချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေက ခွင့်ပြုထားကြတယ်။ တချို့ဒေသမှာဆိုရင် လက်မထပ်ရသေးတဲ့သူတွေ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အထိတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ မဖွယ်မရာရင်းနှီးလွန်းခြင်းကို လက်သင့်ခံကြတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့ “မတရားမေထုန်” ဆိုတဲ့စကားလုံးက အိမ်ထောင်ပြင်ပ မေထုန်ပြုခြင်းအပါအဝင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အထိတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ မဖွယ်မရာရင်းနှီးလွန်းခြင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဘုရားသခင်က မိမိကိုဝတ်ပြုသူတွေကို ‘မတရားမေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်’ ဖို့ လိုလားပါတယ်။ (၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၃) သမ္မာကျမ်းစာမှာ မတရားမေထုန်ကို အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နတ်ဆိုးပညာလိုက်စားခြင်း၊ သောက်ကြူးခြင်း၊ ရုပ်ပုံကိုးကွယ်ခြင်း၊ လူ့အသက်သတ်ခြင်းနဲ့ ခိုးခြင်း စတဲ့ ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေနဲ့ တန်းတူဖော်ပြထားပါတယ်။—၁ ကောရိန္သု ၆:၉၊ ၁၀; ဗျာဒိတ် ၂၁:၈။
အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ “မတရားမေထုန်ပြုသူ . . . ကို ဘုရားသခင် စီရင်တော်မူလိမ့်မည်” လို့ သမ္မာကျမ်းစာက သတိပေးထားပါတယ်။ (ဟေဗြဲ ၁၃:၄) ပိုအရေးကြီးတာက လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ကို နာခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောင်း ပြသနိုင်ပါတယ်။ (၁ ယောဟန် ၅:၃) ဘုရားသခင်ဘက်ကလည်း ကိုယ်တော့်စကားနားထောင်တဲ့သူတွေကို ကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်။—ဟေရှာယ ၄၈:၁၈။
လက်မထပ်ရသေးဘဲ လိင်မှုကိစ္စပုံစံတစ်မျိုးမျိုး ကျူးလွန်တာက ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားတာလား
“မတရားမေထုန်ပြုခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော ညစ်ညူးခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်းအမှုတို့ကို အချင်းချင်း ပြောဆိုခြင်းပင် မပြုကြနှင့်။” —ဧဖက် ၅:၃။
လက်မထပ်ထားသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အထိတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ မဖွယ်မရာပြုလုပ်တာက ဘာမှမမှားဘူးလို့ လူအများ ယူဆကြတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာမှာ လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားတဲ့ အပြုအမူတွေအကြောင်း ဖော်ပြရာမှာ မတရားမေထုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ လိင်ဆိုင်ရာ “မသန့်ရှင်းခြင်း” နဲ့ “အကျင့်ပျက်ခြင်း” တို့အကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားတယ်။ (၂ ကောရိန္သု ၁၂:၂၁) လိင်ဆက်ဆံတဲ့အထိတော့မဟုတ်ပေမဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်တဲ့သူနဲ့ မဖွယ်မရာရင်းနှီးလွန်းခြင်းကို ဘုရားသခင် မနှစ်သက်ပါဘူး။
လိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးသဘောတူထိမ်းမြားထားတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးပဲ လိင်ဆိုင်ရာတရင်းတနှီးနေခွင့်ရှိပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက “သွေးသားဆန္ဒပြင်းပြခြင်း” ကိုလည်း ပြစ်တင်ထားတယ်။ (၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၅) ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ အမျိုးသားမှာရော၊ အမျိုးသမီးမှာပါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥပမာတစ်ခုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ– အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရည်းစားနဲ့ လိင်မဆက်ဆံဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားကောင်းထားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ရည်းစားနဲ့ မဖွယ်မရာရင်းရင်းနှီးနှီး နေလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့မပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကို အလွန်အမင်းရလိုစိတ်ပြင်းပြတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ “သွေးသားဆန္ဒပြင်းပြခြင်း” အပြစ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လိင်ဆိုင်ရာလောဘကြီးတာကို သမ္မာကျမ်းစာက ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။—ဧဖက် ၅:၃-၅။
“မတရားမေထုန်ပြုခြင်းအမှုမှ ရှောင်ပြေးကြလော့။” —၁ ကောရိန္သု ၆:၁၈။
လက်မထပ်ခင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူတွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး ဆုံးၡုံးသွားမယ်လို့ သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။—ကောလောသဲ ၃:၅၊ ၆။
“မတရားမေထုန်ပြုခြင်းအမှုမှ ရှောင်ပြေးကြလော့” လို့သမ္မာကျမ်းစာက အကြံပြုထားပါတယ်။ (၁ ကောရိန္သု ၆:၁၈) လိင်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှန်သမျှကနေ ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေး နေဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်။ (သုတ္တံ ၂၂:၃) ဥပမာ၊ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားကို မလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းခြင်းကိုရှောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဒီလို သတိပေးထားပါတယ်– “ပညာရှိတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူသည် ပညာရှိတတ်၏။ လူမိုက်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကား ပျက်စီးတတ်၏။”—သုတ္တံ ၁၃:၂၀။
ကိုယ်ကျင့်တရားယိုယွင်းတဲ့အကြောင်းတွေကို စဉ်းစားခြင်းကလည်း လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားစေပါတယ်။ (ရောမ ၈:၅၊ ၆) ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့ လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းကို အသားပေးတဲ့ တေးသီချင်း၊ ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ၊ စာပေနဲ့ တခြားဘယ်အရာကိုမဆို ရှောင်တာက ပညာရှိရာကျပါတယ်။—ဆာလံ ၁၀၁:၃။
အချစ်၊ လိင်ကိစ္စနဲ့ လက်မထပ်ဘဲအတူနေခြင်းအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဘာပြောသလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ | ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအကြောင်း သိပါသလား
နိုးလော့! စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ | ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအကြောင်း သိပါသလား